Wakhtiga Ayuu Dareemay Dhibkii U Geystay! | Dhaymoole News
Wakhtiga Ayuu Dareemay Dhibkii U Geystay!
Taariikhda dunida waxa ka buuxo bogag ay ku taxan yihiin magacyada kooxo iyo dad gaar ah oo shar iyo dhibaato dunida la dhex joogay. Kuwaasi sharka badan iyaga laftigooda ayaa ahaa quus iyo niyad jabku wheel u noqday. Waxay caado ka dhigteen dilka, dhiig daadinta. Waana dad kibir iyo islweyni sidaasi u sameeya.
Ninka lagu magacaabo Ted Bendy waxa uu ahaa nin Maraykan ah oo dhashay sanadkii 1946, waxaana uu noqday qarnigii 20aad ninkii dilalka ugu xun geystay waxa uu si fool xun oo arxan daran qoorta uga jaray 20 qof oo aan wax dhibaato ah u geysan.
Laakiin ugu danbaystii waa la qabtay isagana waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga laydhka ah sanadkii 1989. Waxa uu sheegay inuu iska jeclaa kana heli jiray qaylada kuwa uu qoorta ka goyanayo. Wakhtiga kurisga dilka lagu sii waday ayuu aad u barooraty isagoo xusuustay dhibkii uu geystay. Sida u maalintaasi u ooyay ayay dad badan oo uu dilay iyaguna ooyeen wakhtigii uu ku xadgudbayay. Waana markii uu dareemay xanuunka dhibkii uu geystay.